ဆိုင်ကယ်စီး ဒုစရိုက်ကျူးလွန်သူတွေပေါလာနေတဲ့ မန္တလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဆိုင်ကယ်စီး ဒုစရိုက်ကျူးလွန်သူတွေပေါလာနေတဲ့ မန္တလေး
ဆိုင်ကယ်စီး ဒုစရိုက်ကျူးလွန်သူတွေပေါလာနေတဲ့ မန္တလေး
Posted by piti on Aug 24, 2011 in Myanma News, Society & Lifestyle | 24 comments
မန္တလေးမြို့ဟာ ဟိုးတစ်ချိန်ကဆိုရင် စက်ဘီးမြို့တော်အဖြစ် ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ မြို့တစ်မြို့ပေါ့။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆိုင်ကယ်တွေကို လိုင်စင်လွယ်ကူသက်သာစွာ ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာကြောင့် ဆိုင်ကယ်မြို့တော်အဖြစ် ကျော်ကြားနေပါတယ်။ လူဦးရေ ၁ သန်းကျော်လောက် မှီတင်းနေထိုင်တဲ့ မြို့ကြီးမှာ ဆိုင်ကယ်စီးရေက ၄ သိန်းလောက် ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်အသစ်တွေလည်း တစ်နေ့တစ်ခြား တိုးပွားလာနေဆဲပါ။ တရုပ်ဆိုင်ကယ် အသစ်စက်စက်တွေရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေလည်း မိုးဦးကျမှိုပေါက်သလို ဖွင့်လာကြတာ တွေ့နေရပါတယ်။
လိုင်စင်ရှိတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေ များပြားလှသလို လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကလည်း များပြားနေပါတယ်။ လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်တွေ၊ လိုင်စင်ရှိပြီး နံပါတ်ပြားဖြုတ်ပြီး စီးနင်းတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေ လမ်းပေါ်မှာ အများအပြား တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ ဒီလိုစီးကမ်းမဲ့တဲ့ဆိုင်ကယ်အရေအတွက် များလာတာဟာ လုံးဝမကောင်းပါဘူး။ ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေ ကျူးလွန်းကြသူတွေ အားလုံးနီးပါးဟာ လိုင်စင်မဲ့၊ နံပါတ်အတုတပ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေ ဖြစ်တာ သတိထားမပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာက ရာဇ၀တ်မှုတွေ ဆိုင်ကယ်နဲ့ကျူးလွန်တာများလာတဲ့အချိန်မှာ အရေးယူမှုအချို့တော့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးတာ သတိထားမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စနစ်တကျ နှိမ်နင်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ပညာပေးနိုးဆော်နိုင်မှုပိုင်း အားနည်းလို့ မအောင်မြင်ခဲ့တာလို့ ယူဆမိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆိုင်ကယ်တွေကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် အရေးယူစစ်ဆေးမယ်လုပ်လိုက်တိုင်း ကျောင်းသားမပီသတဲ့ ကျောင်းတော်သားတွေနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီး နောက်ဆုတ်ပေးနေရတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ ကျောင်းသားမပီသတဲ့ ကျောင်းတော်သားတွေကလည်း ကျောင်းသားကဒ် ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရတာဟာ စည်းကမ်းမဲ့ပြုလုပ်ခွင့်ကဒ် ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရတယ် လို့များမှတ်နေကြလားမသိပါဘူး။ ကျောင်းတော်သားတော်တော်များများဟာ စည်းကမ်း ဆိုတာတွေကို ချိုးဖောက်နေလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ကျောင်းတော်သားအများစုကို အရာရှိကြီးကြီးမာစတာတွေရဲ့ သားတွေက ဦးဆောင်နေတာဟာလည်း စည်းကမ်းကိုထိမ်းသိမ်းပေးနေရတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အတွက် အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီတော့ ရာဇ၀တ်မှုတွေကို အထူးသဖြင့် အိတ်လုယက်မှုတွေကို ကျူးလွန်ချင်သူတွေအတွက် ဆိုင်ကယ်စီးပြုလုပ်ဖို့ ပိုမိုအခွင့်အရေးရနေတော့တာပေါ့။
၂၃-၈-၂၀၁၁ နေ့ည ၈နာရီ မိနစ် ၂၀ ခန့်လောက်က သိပ္ပံလမ်းပေါ် ဗိုလ်ချုပ်ရွာနား ၆၆×၆၈ လမ်းကြားလောက်မှာ ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဆီကနေ့ အိတ်တစ်လုံးလုယက်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြောမယ်ဆိုရင် အဲဒီနေရာဟာ တခါတရံလူပျတ်ပါတယ်။ မှောင်လည်း မှောင်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ပေါ်က လမ်းအများစုမှာ လမ်းမီးကလည်း မလင်းတာလည်း များပါတယ်။ လူရှင်းနေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး မသမာသူတွေက ဆိုင်ကယ်နဲ့ပဲ အိတ်ကိုစောင့်ဆွဲ လုယူ မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ လုယက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဆိုင်ကယ်ဟာ လဲကျကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ကံကောင်းလို့ ဒဏ်ရာတော့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မရခဲ့ပါဘူး။ အိတ်ထဲမှာ ဘာတွေဘယ်လောက် ပါသွားတယ်ဆိုတာတော့ မသိပါဘူး။ လဲကျရာမှာ အခန့်မသင့်ရင် ကျိုးပဲ့သွားနိုင်သလို အသက်ဆုံးရှုံးမှုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလို လုယက်မှုတွေဟာ မန္တလေးမှာသာမက တနိုင်ငံလုံး မကြာခဏဖြစ်ပွားနေတတ်ပါတယ်။ မိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ အတော်ရှားပါတယ်။ မူခင်းဂျာနယ်တွေမှာ တနိုင်ငံလုံးက ခိုးမှု၊ လုယက်မှုတွေရဲ့ တရားခံတွေကို ဖမ်းမိတဲ့သတင်းမှာ တူညီတာတစ်ခုကို သတိထားမိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကာရာအိုကေ စားသောက်ဆိုင်လို၊ စင်တင်စားသောက်ဆိုင်လို၊ အနှိပ်ခန်းလို နေရာမှ လုပ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပျော်ပါး သောက်စားနေကြ၊ နေတတ်တဲ့ လူငယ်တွေ ဖြစ်နေတာပါ။ တခဏပျော်ရွှင် မှုအတွက် တဖက်သား စိတ်ဒုက္ခရောက်မှာ ထည့်မတွက်ကြတဲ့ ဆင်ခြင်ဥာဏ်နည်းတဲ့သူတွေပေါ့။
သက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူခဲ့မှုတွေ မရှိသေးပေမယ့် အေးချမ်းသာယာတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ကို တည်ဆောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီလိုကိစ္စတွေကိုလည်း ထိရောက်အောင် အရေးယူဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ ကာရာအိုကေစားသောက်ဆိုင်တွေ၊ စင်တင်တေးဂီတနဲ့တွဲဖွင့်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ အနှိပ်ခန်းတွေကို အကုန်ပိတ်သိမ်းပစ်သင့်တယ်လို့တော့ မပြောလိုပါဘူး။ စနစ်တကျရှိအောင်တော့ ကျပ်မတ်သင့်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ အထူးသဖြင့် ကျောင်းသားတွေကိုလည်း ထိရောက်တဲ့ပညာပေးမေတ္တာရပ်ခံပြီး လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်တွေ၊ နံပါတ်တုတပ်ဆိုင်ကယ်တွေကို ဖမ်းဆီးရာမှာ ပူးပေါင်းဖို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသိပေးစီးရုံးပြီး ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
ဆိုင်ကယ်စီး ဒုစရိုက်ကျူးလွန်သူတွေပေါလာနေတဲ့ မန္တလေးကို ကယ်တင်ပေးကြပါလို့ အားလုံးကို မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
အမလေး နော် ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ…
”မန္တလေးမြို့ပေါ်က လမ်းအများစုမှာ လမ်းမီးကလည်း မလင်းတာလည်း များပါတယ်။ ” ဒါတော့အမှန်ဘဲ၊ တော်တော်လည်းဆိုးတယ်၊ ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရဘူး၊ ဘယ်သူမှလည်းမလုပ်ကြဘူး။
ညနေခင်းလေး စောစောရေချိုး ကျုံးနဘေး ဆိုင်ကယ်လေး ထွက်စီး ရတဲ့အရသာ၊
ဘယ်အရာနဲ့မှ မလဲနိုင်ပါ၊ တစ်ခြားတစ်နေရာရောက်နေလဲ လွမ်းနေမိတာပါ၊
ခုလို ဒုစရိုက်ကျုးလွန်တဲ့သူတွေ ရှိနေပုံမျိုးနဲ့ ခက်ပဲခက်ရချည်ရဲ့ ၊
ကူညီပါရစေ တွေ က ဘယ်ရောက်ကုန် တာလဲ၊ တစ်ခုခုတော့ လုပ်ကြပါအုံးနော် ။
ဆေးကွဲနေရင်း လက်စမ်းသွားတတ်တဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးဓားသမားတွေလည်းရှိသေးတယ်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယမြို့တော်လဲဖြစ် မင်းနေပြည်တော်ဟောင်းတစ်ခုအဖြစ်ထင်ရှားတဲ့မန္တလေး မှာခုလို သတင်းမျိုးနဲ့ ဆိုးဝါးနေတာကြားရတော့ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ကျောင်းသားလူငယ်တွေမို့ ယဉ်ထိန်းရဲ တွေထိန်းမရဘူးဆိုတာတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ခုချိန်မှာ ပိုတင်းကျပ်သင့်ပါပီ။အရာရှိသားသမီး လဲ အရေးယူသင့်ယူရမှာပါ။လိုင်စင်မဲ့ ယဉ်တွေပေါများလာတာလဲ မကောင်းမှုဒုစရိုက်လုပ်ဖို့ ပိုလွယ်လာတယ်ထင်ရပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် စာရေးသူဆွေးနွေးသလိုပါဘဲ။ကျောင်းသားလူငယ်တွေကြားမှာ အရက်ဘီယာ၊မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ အပျော်အပါးတွေက နေရာယူလာတာ ခေတ်မှီတယ်ဘဲပြောရမလား၊စာရိတ္တပိုင်းချွတ်ယွင်းတယ်ပြောရမလား–???အားလုံးကို. ပညာပေးဆွေးနွေးဖို့ ထက် အရက်ဘီယာဆိုင်တွေ စင်တငိတေးဂီတ ဆိုင်တွေ ကာရာအိုကေ နိုက်ကလပ်တွေ ကို လွယ်လင့်တကူဝင်ထွက်ခွင့်မရအောင် ဈေးတင်ဖို့ ပါ။အရေအတွက်လျှော့ချရပါလိမ့်မယ်။ခုက ဘယ်မြို့မှာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘီယာဆိုင်အရက်ဆိုင် တွေက ဖင်ချင်းပေါက်မတတ်ဖွင့်ထားပြီး လွယ်လင့်တကူဝယ်ယူလို့ ရနေတာကလဲ ပြဿနာပါ –?
ခေတ်မှီ တယ်မထင်ပါဘူး …၊ အကျင့်ပျက်တာ…၊ ဘီယာဆိုင် အရက်ဆိုင်ကိစ္စတွေအတွက် ရော စာရေးသူ
ဈေးကွက်စီးပွါးရေးစနစ်လေဗျာ…၊ တားနေလို့လဲ ရတော့ပါဘူး…၊
မဟုတ်ဘူ. ကိုဂျစ်ပစီ–ကျောင်းသားလူငယ်အရွယ်ဆိုတာအတုမြင်အတတ်သင်တဲ့အရွယ်ပါ။နိုင်ငံ့ရတနာလေးတွေပါ။ခုလိုမျက်နှာလွဲ ခဲပစ်မပြောပါနဲ့ ။အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြုပြင်ပေးဖို့ တာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။သေချာ စဉ်းစားပါဦးနော့
မမော်သီး ပြောတာလဲမှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ခေတ် လူငယ်လူရွယ် အားလုံး အတုလဲမြင်ပြီးကြပါပြီ၊
အတတ်လဲ သင်နေလောက်ပါပြီ၊ ပြဿနာက ဒေမိုကရာဆီယာ……………….
ဆိုင်ကယ်တွေများလာလို့ဒုစရိုက်ကျူးလွန်တာဆိုတာ မှန်သင့်သလောက်မှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဆိုင်ကယ်မပေါ်ခင်ကတည်းကလဲ လုနေတာပါဘဲ။
မလေးရှားJohor Bahru ကနေ စင်္ကာပူကိုဝင်တဲ့ Check Point မှာ တနေ့တနေ့ အလုပ်လာလာပ်တဲ့သူတွေ Queue ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ အလစ်သုတ်တဲ့ ကိစ္စကလည်း ခုချိန်ထိပါဘဲ။ ဆိုင်ကယ်သမားချင်းတောင်လိုက်မမှီဘူး၊ အရမ်းလျှင်တယ်၊
ဗီယက်နမ်မှာ လဲ ထိုနည်း၎င်းပါဘဲ။ လမ်းသွားရင် ကိုယ့်ပိုက်ဆံအိပ်ကို လက်က မကိုင်ရဲသလောက်ဘဲ။
ဆိုလိုချင်တာက ဒီအချောင်သမားဆိုတာ ဘယ်တော့မှပျောက်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ သွားသတိ လာသတိရှိပြီး၊ မလိုအပ်ရင် မသွားတာ အကောင်းဆုံးပါ။
ဟုတ်ပါတယ် အစ်ကိုပြောတာမှန်တယ်၊ ကျွန်တော့် တို့မွန်ပြည်နယ် သိမ်ဇရပ်စံပြကျေးရွာ မှာလည်းအခုတလော ဆိုင်ကယ်လုယက်မှုတွေတော်တော် ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ် ညအချိန်မတော် ဆိုင်ကယ်တက္ကစီ လာငှားတယ်ပြီးတော့ လူပြတ်တဲ့နေရာရောက်ရင် ဆိုင်ကယ်ကို လုယက် လူကိုသက် ပြီရင်ဆိုင်ကယ်နဲ့ ထွက်ပြေး တယ်၊ အဲလိုဖြစ်တာအကြိမ်ပေါင်းမနဲ့တော့ပါဘူး တစ်တစ်ကြိမ် မှလဲပေါ်အောင်မဖေါ်ထုတ်နိုင်ကြ ဘူး ဒီလိုသာဖြစ်နေရင်ကျွန်တော့် တြို့မန်မာနိုင်ငံ ဟာ လွတ်လပ် ငြမ်းချမ်း တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ထောင်တဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ် ၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော့် တိုအားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်၊( နိုင်တဲ့နေရာကနေ တာဝန်ထမ်းကြတာပေါ့ ဗျာ ) *************
နိုင်ငံရေးသမားလို့ ဆိုပေမဲ့ တကယ်လွတ်ပေးတာတော့..
အဲ့ သလိုတွေ လွတ်လာပြီးရင်တော့..ရန်ကုန်မှာတော့..ဈေးနဲ့ ကားပေါ်တွေ မှာ
သတိကိုထားနေရဲ့ နြ့ ပါတာပါဘဲ
မိန်းမတွေ တောင်..အုပ်စုနြ့ ဘဲ…..
ရပ်ကွက်ထဲ မှာတခါခံရဘူးတယ်….စက်ဘီးနဲ့ ပြိုင်ဘီးနြ့ …
..အကြံပေးသွားတယ်…..နောက်တန်ဘိုးရှိတာမ၀တ်နဲ့ တဲ့ ..
” ဆွဲကြိုးတုတ်လို့ သာ ”
မသိစေနဲ့ ..သူဆို..ဒေါ်လာနဲ့ USကမချဘူး….ဘာရမလဲ
မန္တလေးမှာ မိုးရွာရင် မီးပွိုင့်ကအလုပ်မလုပ်ဘူး
ဒါတော့ ရန်ကုန်နဲ့တူပါတယ်။ လမ်းကြောပိတ်ပြီး ယာဉ်ကြောပိတ်ပြီးဆို ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှန်းမသိဘူး။ ဒါတောင် ရန်ကုန်မှာ ဆိုင်ကယ်စီးခွင့်မရှိလို့ ရှိများရှိရင်တော့ အလုပ်သွားအလုပ်ပြန် ကားပေါ်တင်အချိန်ကုန်နေရော… ခုတောင် တော်တော်ဆိုးနေတာ… မန်းလေးတော့ တစ်ခါပဲ ရောက်ဖူးတော့ ဘာတွေပြောင်းလဲနေလဲဆိုတာမသိတော့ဘူး။
မိုးရွာရင်မီးပွိုင့်က အလုပ်လုပ်ပါတယ် ဆိုင်ကယ်နဲ့လုတာကတော့ ကိုယ့်ဟာကို ဆင်ခြင်မှရမှာပါ
အဲ့လိုလုတာတွေလိုက်ဖမ်းဖို့ ရဲတွေကိုတစ်မြို့လုံးကိုဖြန့်ထားရမလ်ိုပါပဲ အဓိက က မိန်းကလေးတွေ
ပိုပြီးတော့သတိထားရမှာပါ မိန်းကလေးတွေက ဆိုင်ကယ်လည်းအမြန်မမောင်းရဲ ပိုက်ဆံအိတ်တွေ
လွယ်တာလည်း သူတို့ပဲဆိုတော့ လုခံရရင် မမောင်းရဲလ်ို့ မလိုက်နိုင်လို့ ဆုံးမှာသေချာပါတယ်
လုတဲ့သူကလည်း နံပါတ်ပြားကို အတု ဒါမှမဟုတ်ရင် ဖြုတ်ထားမှာပါ ယောက်ကျားလေးတွေ လုခံရတယ်လို့
သိပ်မကြားမိပါ ဒါကြောင့်မိန်းကလေးတွေပိုပြီးသတိထားဖို့လိုပါတယ် မြို့သစ်ဘက်တွေသွားရင် ညဘက်ဆို
ဆိုင်ကယ်နဲ့လုတာကို ကိုယ့်ဟာကို ဆင်ခြင်ရမယ်ဆိုတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ…
ရဲတွေကို တစ်မြို့လုံး ဖြန့်ထားရမယ်မလိုပါပဲ ဆိုတာကတော့ဗျာ…
ရဲတွေရဲ့အဓိကတာဝန်တစ်ရပ်ကိုက ပြည်သူတွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတာလေဗျာ..
ဒီတော့ တစ်မြို့လုံးကင်းလှည့်နေရမယ်… ဖြန့်ထားရမယ်ဆိုတာ အထူးပြောစရာ မလိုဘူးလေ…
အခုတော့ဗျာ… မန္တလေးမြို့ကို လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်တွေ အဓိက၀င်ရောက်တဲ့ မန္တလေး-မူဆယ် လမ်းမပေါ်မှာ ဆိုင်ကယ်လေးအသာရပ် မိုက်ကြေးလေးခွဲ မသိသလိုလွှတ်ထားပေးနေတာပဲ လုပ်နေတယ်ဗျာ…..
မြို့သစ်ဘက်တွေသွားရင် ညဘက် ပိုသတိထားသင့်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်…
24-8-2011 နေ့ ညပိုင်းက မန္တလေးမြို့လယ်ခေါင်မှာ ဆရာမတစ်ယောက်ဆီက အလားတူ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လုယက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လို့ သိရတယ်ဗျာ….. ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် စိတ်မချရတော့ပါဘူး……… ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ကျနော်ဆိုလိုချင်တာက လုံခြုံအေးချမ်းဖို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ
လိုင်စင်မဲ့ စီးနင်းကြတဲ့သူတွေလည်း ဆင်ခြင်ပေးကြဖို့… မသိချင်ယောင် ဆောင်နေသူတွေလည်း ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကျေဖို့… ကျောင်းသားတွေကလည်း စည်းကမ်းအတိုင်းလိုက်နာပီး တာဝန်ရှိသူတွေက လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်လား စစ်ဆေးတဲ့အခါ အေးအေးဆေးဆေး အစစ်ခံဖို့ … …..
နောက် လုပ်သင့်တာတွေ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သွားစေဖို့ပါ……….
အေးချမ်းသာယာပြီး စိတ်ချလက်ချနေထိုင်ချင်တာက အဓိကပေါ့နော်
အဓိကကတော့ .. စည်းကမ်းပေါ့..စည်းကမ်း .. အောက်ခြေသိမ်းကအစ .. စည်းကမ်းနဲ့ ယှဉ် ..
မိမိကိုကိုယ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်တဲ့.. မိမိ(တိုင်း) ကောင်းရင် .. တစ်မြို့လုံးလိုလို ကောင်းပြီးသားပါ ..